के तपाइँ वा तपाइँको साथी सुत्दा जोडजोडले घुर्छन् ? यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार – ramechhapkhabar.com
के तपाइँ वा तपाइँको साथी सुत्दा जोडजोडले घुर्छन् ? यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार
सुत्दा जोडजोडले घुर्ने एक यस्तो समस्या हो, जसले आफुलाईभन्दा पनि आफ्नो छेउमा सुतेकालाई बढी असर गर्ने गर्दछ। घुर्ने व्यक्तिले बिरलै आफ्नो घुराइको महसुस गर्दछन्, जसकारण अर्को दिन कसैले त्यस विषयकाबारेमा कुरा उठायो भने आफुलाई लाज हुने गर्दछ। घुर्ने समस्याको घरेलु उपचार थाहा पाउनु अघि यसका कारणबारे जानकारी लियौँ :
अधिक तौल हुनु
गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिकबाट टिश्यु (तन्तु)मा सुन्निने कार एलर्जी वा चिसोका कारण बन्द नाक हुनु नेजल पोलिप्स अर्थात् नाक भित्र रहेको गैर क्यान्सर युक्त गांठ लाइ असर पर्न मुखकोमाथि रहेको टिश्युमा सुन्निनेपना हुनु जिब्रो सामान्य अवस्था भन्दा ठूलो हुनु वृद्धावस्थाको कार कमजोर मांसपेशीहरूका कार मदिराको सेवनका कार निद्रा लाग्ने औषधिको प्रयो यसका घरेलु उपचार
जैतूनको तेलको प्रयोग : निन्द्रमा घुर्ने अवस्थालाई कम गर्न जैतुनको तेलले धेरै फाइदा गर्दछ। घुर्नुको मुख्य कारणमा स्लिप एपनिया पनि संलग्न हुन्छा। जसका कारण स्लिप एपनियालाई निर्मुल गर्न खानामा वा शरीरलाई मालिस गर्दा जैतुनको तेल प्रयोग गर्नु पर्दछ। एनसीबीआई वेबसाइटमा प्रकाशित एक अनुसन्धानक अनुसार जैतुनको तेल भूमध्यसागरको खानाको एक प्रमुख अंश हो र यो आहार निन्द्रा र श्वासप्रस्वासको लागि पनि फाइदाजनक छ।
बेसारको प्रयोग : अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एपनिया सिन्ड्रोम एक रोग हो जसमा निन्द्राको बेला सास फेर्ने दर कम हुन्छ र व्यक्तिले घुर्न थाल्दछ। यस्तो अवस्थामा घरेलु उपचारका लागि बेसार पानी वा दूधमा बेसार मिलाएर पिउँदा समस्याबाट समाधान मिल्न सक्छ। घुर्नु निद्रामा आउने एपनियाको एक प्रमुख लक्षण मानिन्छ। बेसार जस्ता एन्टीइन्फ्लेमेटरी पदार्थले घुर्ने समस्या कम गर्ने गर्दछ।
लसुनको प्रयोग : लसुनलाई प्राचिन कालदेखि धेरै शारीरिक रोगहरुको समस्याहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिने गरिएको छ। लसुनको सेवनले पनि घुर्ने समस्यालाई कम गर्ने सहयोग गर्दछ। लसुनले अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एपनिया सिन्ड्रोमबाट हुने घुर्ने समस्यालाई कम गर्ने गर्दछ। यसमा पाइने एन्टीइन्फ्लेमेटरी गुणहरूले घुर्ने समस्या हटाउन सहयोग पु¥याउँदछ।
बाफ (स्टिम) लिने : चिसोका कारण प्राय मानिसलाई रुघा खोकी लाग्ने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा नाक पूर्णरुपमा अवरुद्ध हुन्छ र व्यक्तिले मुखबाट सास फेर्न थाल्छ, जसबाट घुर्ने समस्या निम्तिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, नियमितरुपमा स्टिम वा बाफलिने हो भने नाकको अवरुद्धबाट बच्न सकिन्छ जसका कराँ घुर्ने समस्या पनि कम हुने गर्दछ।
योगको सहयोग: बायोटेक्नोलजी सूचनाको लागि नेशनल सेन्टरको वेबसाइटमा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानले स्लीप एपनिया र यसका लक्षण जस्तै घुर्ने समस्याबाट निर्मुल हुन योगको साहारा लिनु पर्ने बताएको छ। दैनिकरुपमा योगका केहि प्राणायामले शरीरमा भएका थुप्रै रोगहरुको जोखिम कम गर्दछ।
दोहा, ११ असोज । कतारले यात्रा नीतिलाई परिवर्तन गरेको छ । कतारले खोप लगाएका...